एउटा मोबाइल दुई–तीन विद्यार्थी- विचार - कान्तिपुर समाचार
एउटा मोबाइल दुई–तीन विद्यार्थी
भाद्र ३०, २०७८ रेजिना पाण्डे
सरसफाइको काम गर्ने चिनजानकी एक दिदीले हालै मलाई भनिन्, ‘मेरा तीन सन्तान छन्, उनीहरूको अनलाइन कक्षा एकै समयमा हुन्छ तर मसँग एउटा मात्र मोबाइल छ ।’
उनले इन्टरनेटको व्यवस्था जसोतसो मिलाएकी रहिछन् । एउटै मोबाइल भएकाले उनका छोराछोरीले पढाइलाई निरन्तरता दिन पाएका रहेनछन् । उनले फेरि भनिन्, ‘तपाईंका छोराछोरी कहिल्यै अनलाइन कक्षामा आउँदैनन् भनेर दिनदिनै स्कुलबाट फोन आउँछ ।’
मेरो घरनजिकै आलु चिप्स र डुनोट बनाएर गुजारा गर्ने अर्की दिदीको कथा पनि यस्तै छ । मोबाइलको अभावले छोराछोरीले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन नपाएको मर्का उनी बेला–बेला मलाई पोख्छिन् । सहरका निम्न वा मध्यम वर्ग तथा श्रमिकहरूले हरेक छोराछोरीका लागि मोबाइल किनिदिनु आकाशको फलजस्तै हो । ल्यापटप त झन् हुने कुरै भएन । कोभिडले अनलाइन पठनपाठनमा जान बाध्य पारे पनि, धेरैलाई यस्तो समस्या परेको छ । विद्यालयलाई सुनायो भने ‘तिमीसँग मोबाइल नहुनु हाम्रो समस्या होइन भन्छ’ अन्त कहाँ सुनाउनु ? यो समस्या अझ दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ ।
पछिल्ला दुई शैक्षिक सत्रका पठनपाठन कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित भए । विद्यालय नै नगई बालबालिकाले कक्षा फड्को मारिरहेका छन् । भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा आएको अनलाइन कक्षामा पनि विविध कारणले सबै विद्यार्थी जोडिन सकेका छैनन् । यसबीच अभिभावकबाट विद्यालयले भने शुल्क उठाएकै छन्, तर विद्यार्थीको सिकाइमा अनलाइन कक्षाले सहयोग गरेको छ कि छैन भन्नेमा कतैबाट कुरा उठेको छैन । अनलाइन कक्षामा जसोतसो हाजिर जनाउने विद्यार्थीको पढाइ पनि अपेक्षा गरेअनुरूपको भइरहेको छैन । शिक्षकहरू भन्छन्, ‘सबै विद्यार्थीको पढाइ–सिकाइलाई ध्यान दिन विद्यालयमै हुँदा त गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले झन् ४५ मिनेटको अनलाइन कक्षामा कसरी गर्नु ?’
कोभिड महामारीले सबैभन्दा धेरै असर सम्भवतः शिक्षा क्षेत्रलाई नै गरेको छ । यति लामो समयसम्म गतिलो गरी पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । विकसित देशहरूमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भए पनि हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा यसले काम गरेन । मोबाइल मात्र होइन, सबै भेगमा विद्युत् पुगेको छैन, इन्टरनेटको सञ्जाल त झन् सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । यो रातारात बन्ने पनि देखिँदैन । यस्ता पूर्वाधारबिना अनलाइन कक्षा चलाइयो, अझै चलाइएकै छ । यसले कतिको काम गर्‍यो भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।
अनलाइन कक्षा विकल्प मात्र थियो, यसले पठनपाठनलाई खासै अघि बढाउन सकेन । के कति कारण बालबालिका अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेनन् भन्नेमा शिक्षकमाझ चर्चा हुन सकेन । कोरोनाविरुद्धको खोप बालबालिकाका लागि नआइसकेकाले अझै केही महिना अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर, यतिको लामो कोभिडकालमा पनि हामीले अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । परीक्षाहरू पनि भर्चुअल भएनन् ।
काठमाडौंका स्थापित विद्यालयहरूका विद्यार्थीको परीक्षा र शिक्षण सिकाइ अनलाइनबाट भए पनि, मैले कुरा गरेका दिदीहरूजस्ता धेरै अभिभावकलाई यसले थप तनाव दिएको छ, कतिलाई त आर्थिक बोझ पनि थपिदिएको छ । ती दिदीहरूलाई यतिका कष्ट सहँदा पनि अनलाइन सिकाइ प्रभावकारी नहुनाले झनै दुःखी बनाएको छ । सरकारले बत्ति, इन्टरनेट र मोबाइल वा कम्प्युटर विद्यार्थीहरूसँग छ कि छैन भन्ने नबुझी अनलाइन कक्षा चलाउँदाको परिणाम हो यो । इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँमा सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो । दूर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य–शिक्षक–अभिभावक सबै उत्तरदायी हुन्छन् । तर, हाम्रोमा यी तिनै पक्षले यसका लागि पर्याप्त काम गरेनन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:०१
कसको जित ? कसको हार ?
भन्न त भन्छन् मान्छेहरू– आमा बन्नु एक महिलाका लागि दिग्विजय हो । तर, गर्भवति हुँदा म साँच्चै हेरकपल्ट खुम्चिएको थिएँ । किन ?
भाद्र ५, २०७८ रेजिना पाण्डे
हरे आइमाईको जात ! बिहेको दुई महिनामै नछुनु रोकिएछ नि फलानोकी बुहारीको !’ मेरो बिहे हुनुअघि घरमा, मन्दिरमा, केही अनौपचारिक जमघटमा टोलकी नयाँ बुहारीबारे माथिका खासखुस सुनिरहन्थेँ । तर, कहिल्यै सोचेकी थिइनँ– बिहेपछि मैमाथि संकेत गरेर कसैले एकदिन यस्तै भन्नेछ !
अब मेरो बिहेपछिको कुरा सम्झना गरौं । म बाटोमा हिँडिरहँदा एक महिलाले अर्कीलाई मैतिर देखाउँदै एकदिन भनिन्, ‘हेर हेर, उसको बिहे भएको एक वर्ष पनि भएको छैन, कत्रो पेट बनाएर हिँडेकी ! जति नै प्रगति गरे’नि, पढे’नि आईमाई भनेको आईमाई नै हो !’
भन्नेले त्यति भनिसकेपछि सुन्ने श्रोताको टाउको मतिर फरक्क फर्किएको थियो । दैनिकजसो कोही न कोही नयाँ–नयाँ मान्छेले मतिर फर्केर यस्तै–यस्तै भनेको सुन्थें । वचनहरूले कहिलेकाहीं त फतक्कै गल्थें । कहिलेकाहीं असाध्यै दिक्क लाग्थ्यो । खासमा त्यसबेला भित्रैदेखि लाज पनि लागेर आउँथ्यो । र, ठूलै गल्ती वा अपराधै गरेझैं लाजले रातै भएकी हुन्थें । आफ्नै घरको पिँढीमा त वचन सुन्थें–सुन्थें । काम गर्ने कार्यालयमा पनि महिलाहरू नै मेरो खिल्ली उडाउँथे । मानौं म मजाक गरिनुपर्ने मानिस हुँ, एउटा हास्यको विषय हुँ ।
गर्भवती भएका बेला म एउटा प्राइभेट बैंकमा काम गर्थें । बैंकका स्टाफहरू पनि मतिर फर्केर यस्तै खासखुस गरिरहन्थे, ‘कति चाँडै पेट बोकेकी ! एक वर्ष कुरेको भए हुन्थ्यो नि !’ सँगै चिया खाइरहेकी साथी क्यान्टिनमा भन्थी, ‘केको हतार हो यस्तो ? तँलाई लाज लागेन ?’
हो त्यसबेला म एउटा ‘विषय’ भएकी थिएँ । के महिला गर्भवती हुनु सार्वजनिक चासोको विषय हो र ? बिस्तारै म मान्छेहरूमाझ असाध्यै डराउन थालें, लजाउन थालें । र, महिनौंसम्म घरबाट निस्किइनँ ।
तर, अहिले ? कत्ति छिट्टै समाज परिर्वतन भइसक्यो । अहिलेका नयाँ बुहारीहरू गर्भवती हुनुलाई गर्वको विषय सोच्छन्् । उनीहरू मजस्तो लजाउँदैनन्, मस्तो डराउँदैनन्, ठूलो पेट देखाएरै घरबाहिर निस्किन सक्छन् । ठूलो पेटको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् ।
भन्न त भन्छन् मान्छेहरू– आमा बन्नु एक महिलाका लागि दिग्विजय हो । तर, गर्भवती हुँदा म साँच्चै हेरकपल्ट खुम्चिएको थिएँ । किन ?
साथीेहरू सुझाव दिन्थे, ‘यार ! बिदा लिएर घर बस् । तँलाई देखेर हामीलाई नै अप्ठ्यारो भइसक्यो ।’ अरे यार ! मेरो ठूलो पेट देखेर राजधानीमा बस्ने ‘लेखेपढेका’, महिलालाई लाज किन लाग्छ ? मैले कहिल्यै बुझिनँ ।
बस चढ्थें, मेरो पेटतिर हेर्दै खुइय्य गर्दै सिटमा बसेका महिलाहरू खासखुस गर्थे, ‘के गर्नु आइमाईको जुनी ! कति गाह्रो हगि !’ तर, उनीहरू आफू बसेको सिट छोड्दैनथे । आँखा जुधिहाले उनीहरू झ्यालबाहिर सडकमा गुडिरहेका गाडितिर नजर पुर्‍याउँथे ।
बिहेलगत्तै गर्भवती भएका महिलालाई गसिप बनाइन्छ, जसरी म बनें । अनि बिहे गरेको ४–५ वर्षसम्म पनि कोही महिला गर्भवती भइनन् भने के हुन्छ ? छेउछाउका महिलालाई फेरि शान्ति हुँदैन । चाँडो गर्भवती भए पनि तनाव, ढिलो भए पनि तनाव ! चाँडो भए प्रश्न सुन्नुपर्छ, ‘यत्ति चाँडो किन ?’ ढिलो भए सुन्नुपर्छ, ‘चाँडो गर । ढिला भएन र ?’
गल्तीबिनै तिखा बाणजस्ता बोली सुनिरहनुपर्छ सधैं । अरूलाई, अरूको जिन्दगीलाई, विचारलाई, बुझाइलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई अब पनि कसैले भनिरहनुपर्छ ? कसैले सिकाइरहनुपर्छ र ?
अब म र मजस्तै महिलाले दैनिकजसो भोग्ने केही असाध्यै पीडा र तनावका कुरा गरौं । डेलिभरी गराउन सिनामंगलको एक अस्पताल पुगेकी मेरी एक साथी सुत्केरी व्यथाले चिच्याइरहेकी थिइन् । उनलाई एउटी नर्सले बेस्कन हकारिन्, ‘दुख्छ भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै किन पेट बोकिस् ?’ अहो ! कस्तो प्रश्न, कस्तो कटाक्ष ! ‘पढे–लेखेको’, अस्पतालमा काम गने ‘सभ्य मान्छे’ को प्रश्न ! सम्झेरै नौनाडी गल्छ ।
केही दिनअघि, एक जना दिदी नुहाएर भर्खरै बार्दलीमा निस्केकी थिइन् । उनको हातमा चुरा र घाँटीमा पोते नदेखेपछि दिदीकी सासू निकै आक्रोशित भइन् । ‘लौ न के अचम्म देख्नुपर्‍यो यो ?’ भन्दै हल्ला सुरु गरिन् । उनले एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहिन्, ‘यसले त हाम्रो नाकै काट्ने भई । अब मेरो छोरालाई के पो हुने हो ! निधार पनि रित्तै
छ ! हातमा चुरा पनि छैन ! बाउ–आमाले बानी पनि नसिकाएका...!’ डरले दिदीले हत्तपत्त भुुइँमा खसेको मखमलको टीका लगाइन् । बिहे गरेको केही वर्ष बितिसकेपछि पनि नाति/नातिना नभएको तनाव सासूलाई थियो । सायद गालीमा त्यो तनाव पनि मिसिएको थियो ।
चुरा–सिन्दूर एक महिला विवाहित भएको कुपन–ट्याग हो, एउटा भयानक बन्धन हो । विवाहित महिला बाहिरफेर हिँड्दा पनि एउटै प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्छ (चुरा र सिन्दूर लगाएको छैन भने)– कति फुस्रो भएर हिँडेको ? साँच्चै मैले नबुझेको कुरो– के चुरा र सिन्दूरमै अडिएको छ श्रीमान्को आयु ? प्रथा सम्झेरै विरक्त लाग्छ ।
महिलालाई पर्ने पीडाको अर्को एउटा डरलाग्दो घटना सम्झिन्छु । केही दिनअघि नेपाल यातायातमा सवार एउटी युवती सिटबाट उठ्दा उसको कपडामा रगत देखियो । रगतले सिट पनि भिजेको थियो । हत्तपत्त सिटमा बस्न खोजेकी अर्की महिला कराइन्, ‘के गरेर हिँडेको ए बेइजती !’ युवतीलाई सबैले फर्केर हेरे । लाजले उनी बसबाट निस्किइन् । यस्तो त सधैं हुँदैन, कहिलेकाहीं हुन्छ, हुन सक्छ ।
दुई महिलाबीचको यो घटनामा कसको जित ? कसको हार ? भन्न त मान्छेहरू भन्छन्- समय फेरियो । तर, साँच्चै हामीचाहिँ फेरिन किन नसकेका ?
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ ०९:४२